जति सुकै बिजिभए पनी केबल २ मिनेट समय दिएर एक पटक अवस्य पढ्नुहोला ! – Sandesh munch
प्रकाशित मिति: आइतबार, माघ ०४, २०७७ समय: १६:०६:२४
त्यसैले , यता उताबाट धेरै सम्पत्ति जम्मा गर्नुको कुनै औचित्य छैन । राम्रोसँग कमाउनुहोस् , राम्रोसँग खानुहोस् , र राम्रोसँग सुत्नुहोस् । जिबनमा आइपर्ने हरेक चुनौतिलाई स्विकार गर्नुहोस् । आफुलाई मनपर्ने सामनको लागि खर्च गर्नुहोस् ।/ यति हाँस्नुहोस कि तपाईंको पेट नै दुखोस । तपाईं जति नै नराम्रो नाच्नुहुन्छ ।
जिन्दगी थोरै छ , हरेक पल म खुशी छु काम मा खुशी छ, आराम गर्दा खुशी छु । आज खाना मा मासु छैन, दाल मा पनि म खुशी छु / आज गाडी छैन , हिडेर जान पनि म खुशी छु साथिहरुको साथ छैन, एक्लै पनि खुशी छु आज कोही रिसाएको छ, उ रिसाएको छ मलाई थाहा भएर पनि म खुशी छु।
जसलाई देख्न सक्दिन , उसको आवाज सुनेर पनि खुशी छु। जसलाई पाउन सक्दिन , उसको बारेमा सोचेर पनि म खुसी छु। हिजोको दिनहरू बितिसकेको छ , उसको मीठो सम्झनामा पनि म खुशी छु. ।भोलिको बारेमा थाहा छैन , पर्खाइमा पनि म खुशी छु । हाँस्दै खेल्दै बित्दै छ समय , आज मा पनि म खुशी छु.। जिन्दगी छ छोटो , हरेक पल म खुशी छु ।
यदि यि माथिका लेखहरु मनमा छुयोभने जवाफ दिनुहोस्। नत्र त म बिना जवाफमा पनि खुशी छु. सुदुर समाज सामाजिक सञ्जाल बाट